About Us | Mycanvas
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေသည့်ပထမဦးဆုံးမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Career Development လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ လူတစ်ဦးအနေဖြင့်သင့်ရဲ့ဘဝကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးမိမိကိုယ်ကိုယ်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိလာစေပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအတွက်အသိပညာရှိနေခြင်းတစ်ခုတည်းနှင့်မလုံလောက်ပါဘူး။ အောင်မြင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရယ်လို့ အဖြေမရှိတဲ့အတွက် သင်ကိုယ်တိုင် ပန်းတိုင်တစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးပြီး အဲ့ဒီ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာသင့်ရဲ့ရှိပြီးသားအရည်အချင်းကိုမြင့်သထက်မြင့်အောင်လေ့ကျင့်ပြီး အောင်မြင်ဖို့အလားအလာလမ်းစကိုဖွင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်ဟာသင့်ရဲ့မူလအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ဦးစွာသင့်မှာဘာအရည်အချင်းတွေရှိလဲ၊ ရှိတဲ့အရည်အချင်းကိုဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သင်တို့အားလုံးမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်စွမ်းရည်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများရှိလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ထိုသို့အရည်အချင်းကောင်းများကိုပိုင်ဆိုင်ထားရုံဖြင့် သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းကိုအောင်မြင်အောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်သလို ဘေးလူတွေကသင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပေမယ့် သင်ကိုယ်တိုင်ကလွဲပြီး တခြားမည်သူကမှ သင့်ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုဖွဲ့ဖြိုးအောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒီ့ထဲကမှ အရေးကြီးဆုံးကတော့ သင့်ရဲ့ အသက်၂၀ ဝန်းကျင်အချိန်တွေမှာ သင့် Career ကိုတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ “My Canvas” ဟာ သင့်၏စွမ်းရည်နှင့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုအတွက် သင့်အားအခွင့်အရေးများပေးမည့် “Interactive Community” တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ “My Canvas” နှင့် တွေ့ဆုံခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာစေမှာပါ...”My Canvas” မှ လေ့လာခြင်းဖြင့်သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ Career ကိုပိုမိုတိုးတက်လာစေမယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်…
ဤမီဒီယာ၏အမည် 'My Canvas' ဟာ အနုပညာရှင်များက အဖြူရောင်ပတ္တူစတစ်ခုပေါ်တွင်ရုပ်ပုံဆွဲခြင်းကဲ့သို့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏မူလအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကိုလည်း တိုးတက်အောင် အရောင်ခြယ်ကာ ဖန်တီးနိုင်သည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်များရေးဆွဲလိုက်သော ပန်းချီကားများဟာ ထူးခြားဆန်းသစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Logo အမှတ်အသားဟာလည်း သင်၏ဘ၀တွင်ထူးခြားသောရုပ်ပုံ (ထူးခြားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု) ကိုပန်းချီဆွဲသကဲ့သို ဖန်တီးရေးဆွဲနိုင်သည်ဟူသောရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
[Career with Story]
ရုပ်ပုံကောင်းတစ်ခုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ “ပုံပြင်” ဆိုတာ ရှိစမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း နောက်ကြောင်းအနေနဲ့ “ပုံပြင်” ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုတာ သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပေါ်အခြေခံပြီး မူလအစပုံပြင်ဆိုတာရှိတဲ့အတွက် လူတစ်ဦးချင်းစီပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ပုံပြင်ကဲ့သို့အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ခရီးလမ်းကိုလျှောက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာများမှ ဗဟုသုတရပြီး သင်တို့ရဲ့အလုပ်ခွင်မှာ Highly Motivated ဖြစ်စေရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
TVP Career (TVPC) is one of the most famous recruiting agencies in Myanmar since 2016. We have strong network with various companies, especially foreign basis, in Yangon. We always support for your job hunting. My Canvas is operated by TVP Career.